आत्मनिर्भरतासँगै समग्र देशको विकासमा प्राविधिक शिक्षाः एनआरएनए – Complete Nepali News Portal
लण्डन । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) दोस्रो विश्व ज्ञान सम्मेलनका अवसरमा शुक्रबार आयोजित प्राविधिक तथा व्यवसायीक शिक्षा विषयक कार्यक्रममा विभिन्न विद्याका विज्ञहरुले धारणा राख्नु भयो ।
सोही कार्यक्रमको दोस्रो सेसन अन्तर्गत पनि राष्ट्रिय योजना आयोगकी सदस्य उषा झा , एनआरएनएका उपाध्यक्ष मन केसी, प्रोफेसर, मशेशनाथ पराजुली, डा. तुल्सी धरेल, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य योगेन्द्र शाही, मन केसी उपाध्यक्ष एनआरएनए , सांसद डा. सूर्य पाठक, एनआरएनएका पदाधिकारी राम थापा तथा एग्रिकल्चर इन्फरमेशन एण्ड ट्रेनिङ सेन्टर नेपालका प्रमुख श्रीराम घिमिरेले आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो ।
डा. उमा प्रधानले सञ्चालन गरेको उक्त कार्यक्रममा बोल्दै अधिकांशले नेपालमा प्रविधिक तथा व्यवसायीक शिक्षाको महत्व रहेको औँल्याउनु भयो । प्राविधिक शिक्षाले युवाहरुको क्षमता अभिवृद्धि मात्र